စိတ်ဖိစီးမှုများမှ ရုန်းထွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ – Sunthit Myanmar
အလုပ်တွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးနေလား? ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာတွေကြောင့် မပျော်ရွှင်ရဘူးလား? စိတ်ဖိစီးမှုများလာရင် ကိုယ်ရော၊ စိတ်ပါ ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးအောင် ပြုမူနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက ရုန်းထွက်ပြီး ပျော်ရွှင်စေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေရှိတာကြောင့် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်သူ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိုမိုခံစားကြရပါတယ်။ နေ့စဉ်ပေါ့ပါးတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ကော်ဖီသောက်တာ၊ စကားပြောတာတွေကလည်း စိတ်ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအပြင် သူငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးတာကလည်း ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
တစ်နေ့တာပြုလုပ်ခဲ့သမျှထဲမှာ ကိုယ်စိတ်ကျေအပ်မှုအရှိဆုံးအရာတွေကို ရေးမှတ်ထားပြီး အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်ပြန်လည်ဖတ်ရှုပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကို ခံစားပါ။ သင့်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတိုင်း စိတ်ကျေနပ်စရာလေးတွေ ပြန်ဖတ်မိရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့သွားစေမှာပါ။
Published December 27, 2017 By sanlenaing
သင့်ကလေးရဲ့ ကစားစရာအရုပ်တွေကို သန့်ရှင်းသွားအောင်ဘယ်လိုဆေးကျောမလဲ။